Waxaan sameeyay video ah in gaare Movie (wmv). Waxaan doonayaa inaan u size ah run ahaantii yar sameeyo si aan u gelin karaa qaar ka mid ah kor u soo dhigay website-ka. Ma suroobi karaa waddo si ay u cadaadin? Sida xaqiiqada ah, waxaan doonayaa inaan sii tayo wanaagsan.
Waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale kala kulmaan dhibaato la mid ah la Windows Movie abuuray. Waxaa sida caadiga ah dhoofisa file aad u weyn taas oo ah wax aan macquul aheyn in la uploaded in YouTube, Google Video, Yahoo Video, ama websites kuu gaar ah. Si kasta si ay u cadaadin? Sure, ku cadaadisaa wmv si weyn oo si deg deg ah soo gudbiyo, taas horyalka Talyaaniga iyo dareen hawadda wmv - Wondershare Video Converter (Windows 10 ka mid ah) si weyn lagu talinayaa. Sidaa daraadeed, in aad awoodid in resize files wmv aad by qabsado encoder, bitrate, xallinta heerka ay, jir, iwm Haddii ay jirto qaab lahayn oo walaac kasta, waxaad u bedeli karaan wmv in qaab kale oo caan ah oo wax, sida MP4 tahay, M4V, FLV , iwm kuwaas oo inta badan decodes file size yar.
Hawadda wmv Best for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Si fudud cadaadisaa wmv video aan khasaaro tayada wax.
Beddel goobaha video sida bitrate, xallinta heerka, jir iyo in ka sii badan.
Wuxuu bixiyaa qaababka tafatirka classic sida dalagga, darsamaan, isku shaandheyn iyo in ka badan.
1. Ku dar files wmv in this hawadda wmv
Guji "Add Files" badhanka si aad u hesho file video il ka miiska iyo fayl. Waxaad dajiyaan karaa in ka badan hal file adigoo riixaya "Ctrl" markii xulashada videos wmv. Sidoo kale, waxaad soo jiidi kartaa jeedi video si toos ah u furmo suuqa hoose. Ka dib marka aad soo dhoofsadaan oo dhan oo iyaga ka mid ah, waxay ku tusi doonaa sida thumbnails in saxaarad shayga, iyo bedelba waad kartaa si liiska, yeelaan magaca faylka wax soo saarka, iwm
2. Dooro "Size yaryar" ku cadaadisaa files wmv
Fisrt, guji image qaab dhinaca midig ee suuqa ugu weyn. In liiska qaab hoos-hoos u muuqata, dooro wmv sida qaab wax soo saarka. Labaad, Settings cick button on koonaha midig u muujiyo guddi goobaha. Saddexaad, hubi "Tirada yar" doorasho iyo wax kasta ha Smart Fit. Waxaa xusid mudan in goobaha Tayada waa feature cusub oo casriya ugu dambeeyey, kaas oo loogu talagalay in aad si fiican ha cadaadisaa video files.
Fiiro gaar ah: Gacanta dejinta koobin ee video iyo maqal ah labada sidoo kale waa la heli karaa haddii aad isha ku yaal. Marka aad gujisid arrow hoos-hoos, waxaad dooran kartaa tiro ka mid ah fursadaha. Tusaale ahaan, waxaad sameyn kartaa sida xal 320 * 240.480 * 272.480 * 368, ama 640 * 480 sida baahidaada. Beegyada uu Hoose badanaa macnaheedu size hoose, laakiin tayo leh ayaa sidoo kale ka hooseeya. Fadlan la ciyaaro koobin ilaa aad ku qanacsan tahay baaxadda vs arrinta tayo leh.
3. riixo Start wmv
Hadda, waxaad u timid inaad tallaabadii u dambaysay, oo kaliya ku dhuftay Beddelaan badhanka si aad u bilowdo riixo. Barnaamijkan waxa aad u hufan on riixo, iyo bar horumarka muujin doontaa boqolkiiba iyo waqtiga soo hadhay. Marka riixo waa dhameystiran, aad si habsami gali kartaa in website online aad jeceshahay ama aad goobta u gaar ah si habsami leh. Shifo!
Video tutorial: Sida loo cadaadin wmv video files
> Resource > Video > Sidee ku cadaadisaa wmv Files in Windows & Mac